Nin ka baxay albaabka diyaaradda ee xaaladda degdegga ah - BBC News Somali
Nin rakaab ah oo saarnaa diyaaradda Ryanair oo ku dhex daalay diyaaradd Spain taagan ayaa ka baxay albaabka loogu talogalay in laga dago marka ay xaalad degdeg ah jirto ka dibna ku fariistay baalka diyaaradda, arrintaas ayuuse dhibaato kala kulmay.
Diyaaraddii uu saarnaa ee London ka timid ayaa soo dagiddeeda dib loo dhigay hal saac, waxaana la sheegay in soddon daqiiqo lagu sii hayay diyaaradda oo taagan garoonka magaalada Malaga.
Ninkan oo la sheegay in uu Poland u dhashay oo da'da kontameeyada ku jiri ayaa xoogaa ku fadhiyay baalka diyaaradda ka hor intii aan gudaha dib loogu celinin.
Laamaha ammaanka ee garoonka ayaa xiray.
Muuqaal uu duubay qof kale oo rakaab ahaa ayaa muujiyay ninka oo ku fadhiya booradiisa gacanta, kuna dul nasanaya baalka diyaaradda, dad qosqoslaya ayaana muuqaalka laga dhex maqli karaa.
Arrintan aan caadiga ahayn ayaa ka dhacday diyaarad lambarka duulimaadkeedu ahaa FR8164 oo ka soo kacday garoonka Stansted kuna sii jeeday magaalada Malaga habeenkii sannadka cusub loo dabaaldegayay.
Jaraa'idka Daily Mail ayaa waraystay labo rakaab oo kale oo diyaaradda la saarnaaa, mid ka mid ah ayaana sheegay in ay ahayd "arrin layaableh" in ninku uu furay albaabka xaaladda degdegga ah loogu talagalay, wuxuuna dadka ku yiri dhanka baalka diyaaradda ayaan aadayaa.
Madaxweynaha Philippine: Dad aan musuq ku tuhmay ayaan diyaarad ka soo tuuray
Laakiin Raj Mistry oo ah rakaaabka labaad ayaa sheegay in ninku uu qabay xannuunka neefta ayna ku adkayd neefsashadu markii uu albaabka ka baxay.
Afhayeen u hadlay shirkadda diyaaraddaha Ryanair ayaa sheegay in dhacdadaasi ay ahayd meel ka dhac lagu sameeyay ammaanka garoonka.
"Booliiska garoonka diyaaradaha Malaga ayaa isla markiiba xiray si su'aalo loo waydiiyo maadaama oo uu meel uga dhacay nidaamka ammaanka ee Spain, xukuumadda Spain ayaana hawsha la wareegtay," ayuu intaas ku sii daray.